Marketing Audit Workshop [ မေတ္တာဖြင့်မျှဝေသည်။ - Limited Spots] - Better Version
Marketing Audit Workshop [ မေတ္တာဖြင့်မျှဝေသည်။ – Limited Spots]
August 13, 2021 2021-11-01 10:13
လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ဖို့အတွက် မားကက်တင်း စီမံချက်ကောင်းတစ်ခု ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် နဲ့ လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်မယ့် မားကက်တင်း ဗျူဟာချမှတ်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် Marketing Audit ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ မားကက်တင်းနဲ့ အရောင်းပိုင်းမှာ တာဝန်ယူထားတဲ့ လူတိုင်း တတ်ထားရမယ့် လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတွင်း နဲ့ လုပ်ငန်းပြင်ပ အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ စဥ်းစားသုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက် စနစ်တကျနဲ့ Marketing Audit ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Better Version က မေတ္တာနဲ့ Workshop လေး တစ်ခု ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ Workshop ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တခါတည်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် မားကက်တင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သုံးသပ်ချက်တွေ တခါတည်း ထွက်လာအောင် လက်တွေ့ လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Zoom Meeting အနေနဲ့ သာ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Live လွှင့်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တက်ရောက်ချင်တဲ့ လူတွေ စာရင်းသွင်းထားဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ အယောက် ၅၀ သာ လက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျင်းပမည့်နေရက် – ၀၆ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၁ (စနေနေ့)
အချိန် – ည ၀၇၃၀ မှ ၀၈၀၀ နာရီအထိ
Only 50 Spots. Registe Now. Save Your Spot.
Zoom Meeting အတွက် အချက်အလက်များကို အီးမေးလ် ပို့ပေးပါမယ်။